पीसी पानाको खरीद गर्दा यसको गुणस्तर कसरी जाँच्ने? - YUYAO JIASIDA SUN PET CO।, लिमिटेड
पीसी पानाको खरीद गर्दा यसको गुणस्तर कसरी जाँच्ने?
समय: 2018-12-19 हिट्स:
अन्य निर्माण सामग्रीहरू भन्दा फरक, को गुणवत्ता पीसी खाली पाना र पॉली कार्बोनेट ठोस पानामा एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु "गुण ग्यारेन्टी अवधि" समावेश छ।. को पाठ्यक्रम, केहि अन्य उत्पादनहरु को लागी तीन वर्ष को लागी एक ग्यारेन्टी छ, एक वर्ष भने, यद्यपि निर्माता वा गुणवत्ता आश्वासन उत्पादनहरूको निर्माता, तर पीसी पाना वारंटी स्पष्ट लामो समय हो. त्यसैले, पीसी पाना खरीद गर्दा, कसरी पीसी पाना गुणस्तरको खराब न्याय गर्नु पर्छ?
सबै भन्दा पहिले, यदि यो पारदर्शी पीसी पाना छ, हामी पारदर्शिता को विभिन्न देख्न सक्छौं, सामान्यतया दस बर्षे ग्यारेन्टी, पीसी पॉली कार्बोनेट ठोस पाना प्रकाश प्रसारण पुग्न सक्छ 90% वा यसको बारेमा मा Polcarbonate खाली पाना को 80%, यदि प्ल्याक कम प्रवेशयोग्यता, पॉली कार्बोनेट क्वालिटी गरीब छ निर्दिष्टीकरण पाना गरीब छ, प्रकृतिको लागि गुणवत्ता आश्वासनको वर्षको निश्चित संख्या पनि संकुचन हुनेछ.
दोश्रो, हामी ध्यानपूर्वक हेर्न सक्दछौं कि पीसी पानामा अशुद्धताहरू छन् कि छैनन्. अशुद्धता युक्त बोर्डको लागि प्रयोग गरिएको पॉली कार्बोनेट सामग्रीलाई पुन: साइकल गरिएको पुरानो सामग्रीसँग भिन्नतामा मिसिन्छ. यस सामग्री द्वारा उत्पादित पीसी पॉलीकार्बोनेट ठोस पानाको रंग केही फरक हुनेछ. साधारणतया, रिसाइक्लि material सामग्री द्वारा उत्पादित प्लेट अधिक प्रयोग गर्न गाह्रो छ 10 वर्ष. धेरै वर्ष सूर्य जोखिम पछि, यो भाँचिनेछ.
तेस्रो, पारदर्शी पीसी पानाको वारंटी जीवन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कच्चा मालको प्रयोगको अतिरिक्त, त्यहाँ अर्को कारक छ "यूभी कोटिंग", यसको मुख्य भूमिका पॉलीकार्बोनेट संरचना बिगार्न पराबैंगनी रोक्नु हो, यसैले पीसी पाना पहेंलो बेवास्ता, वृद्ध. तपाईको छेउमा हुन सक्छ कि बेस्मेयरसँग यूभी छ मजबूत प्रकाशको तल चम्काउन, यसको किनारा रेखा भाग नीलो स्पष्ट देखिन्छ, परिवर्तनविहीन देखिन यूवी पाना समावेश नगर्नुहोस्.
चौथो, ग्राम तौल हेर्नुहोस्, सामान्यतया राम्रो पीसी पाना, तुलनात्मक रूपमा भौतिक कम्प्याक्टनेस को कारण, गुण भारी छ, बढी कडाई, अन्यथा बनावट नरम छ, गुण हल्का छ.
सामन्यतया, यी चार पोइन्टबाट सुरू गर्नुहोस्, हामी केवल पीसी पानाको गुणवत्ता तपाईंको खरीद मापदण्डको अनुरूप छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न सक्दछौं. म आशा गर्दछु कि तपाईले ब्राण्ड निर्माणकर्ताहरूलाई औपचारिक च्यानलहरूबाट राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्थ्यो जब ठूलो परिमाणमा खरीद गर्नुहुन्छ, धोकामा नपर्न, jiangsu guoweixing प्लास्टिक प्रविधि सह।, लि. अल्छी हुनु योग्य छ.
अर्को : पीसी खाली पाना र परम्परागत ग्रीनहाउस सामग्री बीच के भिन्नता छ?